Vhidhiyo inotevera yaMartin Scorsese yeApple TV +, inowedzera vatambi vayo Ndinobva mac
Vhidhiyo inotevera yaMartin Scorsese, Vakauraya vemaruva mwedzi, ichiri kure nekutangisa kugadzirwa, iyo firimu ichatanga kuratidzwa chete paApple TV +, mushure mechibvumirano chakasvitswa nemutungamiriri neiyo yekutenderera yevhidhiyo chikuva rinopfuura gore rapfuura.
Nhau dzichangoburwa dzinoenderana neiyi bhaisikopo dzinogona kuwanikwa paMugumo. Zvinoenderana nesvikiro iri, William Belleau, Louis Cancelmi, Jason Isbell naSturgill Simpson ndivo vatambi vatsva vanozove vari chikamu chevadiki kubva iyo firimu iyo zvakare nyeredzi Leonardo Dicaprio naRobert DeNiro uye iyo inotiratidza iyo nyaya yekuuraya kwaOsage muma1920s.
Vatambi vatsva vabatana nevatambi, akatopa mabasa ake mumuvhi:
William Belleau Achatamba naHenry Roan, muchengeti weOsage ane hukama hwepedyo nemhuri yaDiCaprio yeBurkhart.
Louis Cancelmi ndiKelsie Morrison, hustler wemuno uye shamwari yaBurkhart.
Jasoni Isbell, uyo anoita kutamba kwake kwekutanga mufirimu, anoridza Bill Smith, mhandu yaErnest Burkhart.
Sturgill simpson Iye anopinda mukati semukurumbira rodeo shasha uye mutengesi Henry Grammer.
Iyi firimu nyowani iri zvichibva mubhuku Mhondi dzeRuva reMwedzi: The Osage Murders Uye Kuzvarwa kweFBI, bhuku rinotaura nezve dzakateedzana kuuraya kweva Osage maNative American vakagara mu Oklahoma.
Iyi firimu yakaiswa muma1920 uye inotevera kuwanikwa kwemafuta akaiswa pasi penyika dzevambotaurwa maNative America. Kuferefetwa kwakabatana nenyaya iyi ndiyo yaive pamberi pekusikwa kweFBI.
Mhondi dzeRuva reMwedzi ichatanga kuburitswa mumitambo, kuitira kukwikwidza muHollywood Academy Oscars, kusvika kune yekushambadzira vhidhiyo sevhisi masvondo mashoma gare gare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Mufirimu unouya waApple TV + waMartin Scorsese unowedzera kuwedzera kwayo
Yekutanga tirera yeMosquito Coast mwedzi mumwe mushure mekutanga kwayo